သင်ယူခြင်း: အင်တာနက်ကိုကိုယ်နှိုက်စွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ သင်ယူ အင်တာနက်ကိုစွဲ
သင်ကခက်ခဲအင်တာနက်ထက်အခြားဘာမှပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရှာဖွေမတွေ့ရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုသိပါသလော သူတို့ကစောင့်ကြည့်တယောက်တည်းသာ ပို. ပို. အချိန်ဖြုန်းသလား? သည်အခြားကိစ္စရပ်များကြောင့်မှသူတို့ကိုပယ်ရှားတော်မူသောအခါစိတ်တိုဖြစ်လာသလား?
တစ် စိတ္တဇရောဂါဆရာဝန် လူငယ်၏ 80% ဝန်းကျင်သူမကရယူထားသောသူတို့အဘို့ဆေးနှင့်အဘယ်သူ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာသုံးရက်သတ္တပတ်မျက်နှာပြင်အစာရှောင်ခြင်းအပြီးတက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံနေသောစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဤအခြေအနေများစိတ်ကျရောဂါတို့ပါဝင်သည်, ADHD / ADD အပြုအမူနှင့်စိတ်ကြွရောဂါ။ သာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုတည်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတာပါလျှင်ကြည့်ဖို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကုထုံးသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေစစ်မှန်ကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ တောင်မှကကို standalone အခွအေနေလျှင်, ဒေါက်တာ Dunckley ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုသုံးရင်အားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
အင်တာနက်စွဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပိုမိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည် လူမှုရေးအထီးကျန်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်စွဲအတွက်ပိုမိုဆိုးဝါးလာစီးပွားပျက်ကပ်နှင့်ရန်လိုမုန်းတီးမှု။
ဗစ်တိုးရီးယား Dunckley ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ စာအုပ်, “ ကလေးငယ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်းဖြင့်အရည်ပျော်ကျမှုများကိုအဆုံးသတ်ရန်၊ အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန် ၄ ပတ်ကြာအစီအစဉ်။"မိဘများသည်မိမိတို့၏စွဲလမ်းနေသောအင်တာနက်အလေ့အထများကိုနားမလည်စေရန်ကလေးများအတွက်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်အင်တာနက် porn စွဲလမ်းမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုမရှိသော်လည်းသက်သေအထောက်အထားများသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည်သုံးပတ်ကြာသည်။ ထို့အပြင်ချောချောမွေ့မွေ့သေချာစေရန်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သည်။
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား, လူမှုရေးမီဒီယာ, ချိန်းတွေ့ apps များ, စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပါဝင်သည်။
2015 သုတေသနလုပ်ငန်း အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံသို့: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကိုပြုလုပ်နိဂုံးမှဦးဆောင် "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အတူစွဲမူဘောင်များနှင့်ရှယ်ယာအလားတူအခြေခံယန္တရားသို့ကိုက်ညီ။ "
အလွန်အကျွံ porn စားသုံးမှု၏ရောဂါလက္ခဏာများမကြာခဏကတခြားရောဂါရှိသူများတု။ porn-သွေးဆောင်သူမြားထံမှစစ်မှန်သောအခြေအနေများခွဲခြားရန်အကောင်းဆုံး option ကိုတစ်ဦးညစ်ညမ်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူစတင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဦးနှောက်မရှိတော့ Hyper-နှိုးဆွသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, က၎င်း၏သဘာဝအ sensitivity ကို recover လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ“ ငါသိခဲ့တာ” ဘလော့ဂါဟာအင်တာနက် (နှင့်အရာဝတ္ထုများနှင့်အပြုအမူများ) စွဲလမ်းစေသည့် ဦး နှောက်ယန္တရားများကိုကောင်းစွာလေ့လာပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြည့်ရှုသူများအားအင်တာနက်သည်သင့် ဦး နှောက်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်စေရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။